AYAA U NUGUL DAGAALKA, EEYAHA LABKA AH AMA EEYAHA DHADIG? - EEYAHA
Waxaa badanaa la i weydiiyaa keebaa dagaalka u nugul, laba eey dumar ah, laba eeyo lab ah mise eey lab iyo dhadig? Kolkaas qofku wuxuu badanaa ku hadlaa inuu dhahayo waxay garanayaan in eeyadu u baahan yihiin inay dhisaan eeyga madaxda u ah laakiin intaas ka dib, eeyaha ma is fahmi doonaan oo ma dagaallami doonaan?
Ragga dhexdhexaadka ah iyo kuwa dheddigga jinsi ahaan qasab kuma aha inay u dagaallamaan. Dhammaan eeyadu waxay leeyihiin heerar xukun oo kala duwan oo isku nooc ah ha noqdaan lab ama dhedig. Waa heerka xukunka ee saameynaya dagaalka, ma aha jinsiga eeyga. Xukunka waxaa weheliya arrimo kale oo saameyn ku yeelan kara dagaalka eeyga sida amni darrada, walwalka, iyo xishoodka astaamaha kale, kuwaas oo aan wax xiriir ah la lahayn jinsiga eyga. Mararka qaarkood astaamahan kale waxay ka dhigaan eeyga inuu u nugul yahay in la weeraro mararka qaarna eygu wuxuu u weeraraa cabsi darteed waligiis ma ahan xaalad gooyn iyo qalalan ee eeyaha oo dhan, hase yeeshee ma aha oo kaliya jinsiga eyga inuu sababo arrinta. Waa run oo haddii aad leedahay laba eey oo aan is beddelin (aan beddelin) eey hormoonnada eeyaha ku jira waxay sababi karaan inay u nugul yihiin dagaalka, laakiin taasi waa sababta oo ah waxay ku keentaa inay iyagu noqdaan kuwo awood badan. Mar labaad waxay dib ugu soo noqotaa xukunka, maaha si fudud maxaa yeelay waa lab ama dhadig. Waxaa jira dhedig nooca alfa iyo dumar raacayaal-hoosaadyo ah oo dhammaantood ku wada jira isla nooc iyo xitaa isla qashin isku mid ah. Taasi waxay sidoo kale u socotaa ragga labka ah waxaa jira niman nooca alfa ah iyo kuwa raacsan oo u hoggaansan ragga oo dhammaantood ku wada nool isla nooc iyo xitaa isla qashin isku mid ah. Waxa kale oo jira eeyo waddada dhex-dhexaad ah oo isku qashin ah. Tan waxaa loo dhihi karaa dhammaan noocyada eyda, noocyada asaasiga ah iyo iskudhafka.
Sidaa darteed, haddii aad korsato laba dhadig oo alfa ah, haa waa laga yaabaa inay rabaan inay midba midka kale la tartamaan in ka badan intaad jeceshahay, laakiin haddaad dooran lahayd lab alfa iyo dheddig alfa wax la mid ah ayay u badan tahay inay dhici lahaayeen.
Intaas markii la sheegay, waxay ku xiran tahay milkiilayaasha inay eey la dagaallamaan iyo in kale. Laba gabdhood oo alfa ah ayaa is fahmi kara haddii milkiilayaashu ay yihiin hoggaamiyeyaal run ah ama way dagaallami karaan haddii milkiilayaashu aysan ahayn. Dhanka kale xitaa labada dhedig ee nooca hoos-raac ah ayaa bilaabi kara inay la dagaallamaan haddii bini-aadamku ay yihiin hoggaamiyeyaal daciif ah. Eeyadu sidoo kale waxay bilaabi karaan inay la dagaallamaan haddii aadanuhu u oggolaado xirmo si aad u noqoto mid aan degganeyn .
Eyga looma oggolaanayo inuu xukumo eey kale. Dadku waxay u baahan yihiin inay mas'uul noqdaan oo eyda oo dhan ku wada hayaan isla heer hoose. Ha u istaagin oo u oggolow hal eey inuu maamulo mid kale hareerahaaga. Tallaabo soo gal oo ogeysii inaysan ku jiri doonin midkoodna gurigaaga. Dadku waa inuu mas'uul ka ahaadaa, eeyaha maahan.
Aadanaha oo dhami waa inuu ka sarreeyaa eeyaha oo dhan. Waa muhiim in dhammaan dadka ku nool gurigaaga ay u muujiyaan hoggaanka eeyaha oo dhan. Waxaa laga yaabaa inaad ku dambayso qaar ka mid ah dabeecadaha aan loo baahnayn haddii dadka qaarkood ay u oggolaadaan eeyaha inay u taliyaan iyaga.
Waxaan haystaa afar eey oo haddii eeygayga midkood xitaa uu bixiyo tilmaam ah inaan xukumo mid kale waan ku dhaqaaqaa oo u ogeysiiyaa inaan la aqbalin. Sidaa darteed eeyadaydu marar dhif ah ayey isku dayaan inay midba midka kale xukumaan. Haddii aan arko, waan isla markiiba joojiyaa. Waa meeshii aan hadaan si fudud uga dhawaajiyo xanaaq sida 'attttt!' ama 'hey!' eeyga oo doonayay inuu xado lafta eyga kale, tusaale ahaan, wuu ogyahay in isaga lagu soo hagaajiyay wuuna iska dhaqaaqay, isagoo ka quustay inuu xado lafta. Hadday eeyadu wax cunayaan oo hal eey dhammeeyaan eeygaas ma garanayo inuu xado cunno eey kale. Waxay si fudud u lugeeyaan markay dhammeeyaan oo waxay u oggolaadaan kuwa kale inay ku dhammaystiraan cadaadis la'aan.
Markaad u ogolaato hal eey inuu maamulo eyga kale ma fureysid oo keliya fursada eygaas inuu kugula tartamo marka xigta, laakiin waxaa jira fursad wanaagsan oo eygu durba kuu arko inaad ka hooseyso nidaamka iyo eeyaha kale oo laga yaabo inay u dagaalamayaan booska ugu sarreeya, iyadoo la dhigayo aadanaha iyaga ka hooseeya. Eeyaha ku dhex jira isla guriga waa in loo sameeyaa si ay isugu arkaan dhul siman midba midka kale, oo had iyo jeer ka hooseeya aadanaha. Nasiib darrose, guryo badan eydu way ka sarreeyaan aadanaha. Xaalado badan bini aadamku xitaa ma oga.
Xusuusnow inaad xirmadaada ka dhigto mid deggan adoo baranaya dabeecadda eyda dabiiciga ah iyo fulinta dareenkaaga eeygaaga. Tan kaliya ayaa saameyn weyn ku yeelan doonta sida eygu u dhaqmo. Dhammaan eeyaha aan degganeyn ma dagaallamaan sidaa darteed xitaa haddii aadan haysan arrimo la dagaallanka waxaa muhiim ah in wax laga barto dabeecadda eyga dabiiciga ah si loo hubiyo in eygaagu si dabiici ah ugu qanco. Eyga xasilloon waa eey faraxsan.
shaxanka cabbirka adhijirka yar yar ee Australiyaanka ah
Halkan ka sii akhriso: Waa maxay sababta eydu u tahay inay noqdaan kuwa raacsan. Iyada oo aadanuhu ku jiro doorka hoggaaminta iyo eey hoosaadsan - eeygu ma farxi karaa?
3 usbuuc daryeel eey ah
luminta midabka sanka eeyga
iskudhafka ingiriiska bull terrier lab mix
10 todobaadkii corso bakoorad jir